Teny tsara indrindra avy amin'i Michael Faraday - Victor Mochere
Michael Faraday dia mpahay siansa anglisy izay nandray anjara tamin'ny fandalinana ny electromagnetism sy electrochemistry. Ny zava-bitany lehibe indrindra dia ahitana ny foto-kevitra fototry ny induction electromagnetic, diamagnetism ary electrolysis. Na dia tsy nahazo fanabeazana ara-dalàna firy aza i Faraday, dia iray tamin'ireo mpahay siansa nalaza indrindra teo amin'ny tantara. Tamin'ny alalan'ny fikarohana nataony momba ny sahan'andriamby manodidina ny conducteur iray mitondra komandy mivantana no nametrahan'i Faraday ny fototry ny foto-kevitra momba ny saha elektromagnetika amin'ny fizika.
Nametraka ihany koa i Faraday fa mety hisy fiantraikany amin'ny taratra hazavana ny andriamby ary misy fifandraisana fototra eo amin'ireo tranga roa ireo. Hitany toy izany koa ny fitsipiky ny induction electromagnetic, diamagnetism ary ny lalàn'ny electrolysis. Ny zavatra noforoniny amin'ny fitaovana rotary elektromagnetika dia namorona ny fototry ny teknolojia maotera elektrika, ary noho ny ezaka nataony no nahatonga ny herinaratra ho azo ampiasaina amin'ny teknolojia.
Amin'ny maha-chemista azy, i Faraday dia nahita benzene, nanadihady ny hydrate clathrate amin'ny chlorine, namorona endrika voalohany amin'ny fandoroana Bunsen sy ny rafitry ny laharan'ny oxidation, ary nalaza ny teny toy ny "anode", "cathode", "electrode" ary "ion" . Faraday tamin'ny farany dia lasa Profesora Fullerian momba ny Chemistry voalohany sy lehibe indrindra ao amin'ny Royal Institution, toerana mandritra ny androm-piainany.
Faraday dia mpanao fanandramana tena tsara izay nampita ny heviny tamin'ny fiteny mazava sy tsotra; ny fahaizany matematika anefa dia tsy niitatra hatrany amin'ny trigonometrika ary voafetra ho amin'ny algebra tsotra indrindra. Ekena ho fototry ny teoria maoderina rehetra momba ny trangan-javatra elektromagnetika ny andiana equation-ny. Ny singa SI amin'ny capacitance dia nomena anarana ho fanomezam-boninahitra azy: ny farad. Albert Einstein dia nitazona ny sarin'i Faraday teo amin'ny rindrin'ny fianarany.
Ny sasany amin'ireo teny tsara indrindra avy amin'i Michael Faraday dia voatanisa etsy ambany.
"Ny foiben'ny fahatsarana dia, araka ny famaritana, toerana ahafahan'ny olona kilasy faharoa manao asa kilasy voalohany." – Michael Faraday
"Ny lehilahy iray izay azo antoka fa marina dia saika azo antoka fa ho diso." – Michael Faraday
“Tahaka ny fony nipetraka teo amin’ny sampana mitokana any an’ala lavitra be ny vorondolo, izay, feno fieboeboana sy fahendrena noforonin’ny tenany, manazava, maneho hevitra, manameloka, manendry zavatra tsy takatry ny saina, nefa mbola manan-danja hatrany. amin'ny tahiry sy vato manodidina - ka mipetraka ary manoratra an'i Mike. " – Michael Faraday
"Ny Bacon ao amin'ny torolalany dia milaza amintsika fa ny mpianatra siantifika dia tsy tokony ho tahaka ny vitsika, izay manangona fotsiny, na ho toy ny hala izay mihodina ao an-kibony, fa toy ny tantely izay manangona sy mamokatra." – Michael Faraday
“Nefa tsy maintsy miaiky aho fa saro-piaro amin'ny teny hoe atomika aho; satria na dia mora be aza ny miresaka momba ny ataoma, dia sarotra be ny mamorona hevitra mazava momba ny toetrany, indrindra rehefa misy vatana mitambatra hodinihina.” – Michael Faraday
"Fa andramo foana, fa iza no mahalala izay azo atao?" – Michael Faraday
"Ny simia dia siansa andrana: ny tsoa-kevitra dia avy amin'ny angona, ary ny foto-keviny dia tohanan'ny porofo avy amin'ny zava-misy." – Michael Faraday
“Aza miresaka momba ny kilalao kilalao, ary lazao fa efa nahita izany ianao taloha. Aleo valio aho, raha manontany anao aho, efa azonao ve izany teo aloha? – Michael Faraday
“Sahirana indray aho izao amin'ny Electro-Magnetism ary mieritreritra fa manana zavatra tsara aho nefa tsy afaka miteny; Mety ho tsimparifary izany fa tsy hazandrano, ka rehefa nisasatra mafy aho dia hongotako ihany. – Michael Faraday
"Tsy poeta aho, fa raha mieritreritra ny tenanareo ianareo, amin'izao tohizako izao, dia hamorona tononkalo ao an-tsainareo ny zava-misy." – Michael Faraday
"Azoko atao ny manova ny fotoanako ho vola amin'ny fotoana rehetra, saingy tsy mitaky bebe kokoa amin'ny farany aho noho ny ampy ho an'ny tanjona ilaina." – Michael Faraday
"Tsy afaka mieritreritra tsipika miolakolaka aho raha tsy misy ny fepetran'ny fisiana ara-batana ao amin'io habaka mpanelanelana io." – Michael Faraday
"Afaka matoky zava-misy aho ary mametraka fanontaniana foana." – Michael Faraday
"Nahita fifandraisana mivantana teo amin'ny andriamby sy ny hazavana aho, ary koa ny herinaratra sy ny hazavana, ary ny saha misokatra dia midadasika ary mihevitra aho fa manankarena." – Michael Faraday
“Matoky kokoa an’ilay lehilahy iray miasa ara-tsaina sy ara-batana amin’ny raharaha iray aho noho ny amin’ireo enina izay miresaka momba izany fotsiny.” – Michael Faraday
“Manolo-kevitra ny hanavaka ireo vatana ireo aho amin'ny fiantsoana ireo anion izay mankamin'ny anoden'ny vatana efa lo; ary izay mankamin'ny katoda dia kation; ary rehefa manam-potoana hiresahana izany aho, dia hantsoiko hoe Iona izy ireo. – Michael Faraday
"Homba an'i Kristy aho, ary ampy izay." – Michael Faraday
“Haneho tsotra izao ny finoako mafy aho, fa io teboka amin’ny fitaizan-tena io izay ahitana ny fampianarana ny saina hanohitra ny faniriany sy ny fironany, mandra-pahitana fa marina, no zava-dehibe indrindra amin’ny zava-drehetra, tsy amin’ny zavatra voajanahary ihany. filozofia, fa amin’ny sampana tsirairay amin’ny fiainana andavanandro.” – Michael Faraday
“Ho solon’ny fanazaran-tena mahasoa, dia manao ny fanirian-dray ho ao an-tsaina foana isika: mandray amin’ny fomba sariaka izay mifanaraka amin’izany isika, manohitra amin’ny tsy fitiavana izay manohitra antsika; fa ny mifanohitra amin’izany kosa dia takin’ny didin’ny saina rehetra.” – Michael Faraday
“Rariny ny tokony hijoroantsika sy hampiharana ny fitsipintsika; fa tsy mety ny mitazona azy ireo amin’ny fahajambana mafy, na mitazona azy ireo rehefa hita fa diso”. – Michael Faraday
"Ny hatsaran-tarehy lehibe amin'ny siansa, ny simia, ny fandrosoana ao aminy, na amin'ny ambaratonga lehibe na kely, fa tsy mandreraka ny lohahevitra fikarohana, dia manokatra varavarana ho amin'ny fahalalana bebe kokoa sy be dia be, tondraka amin'ny hatsarana sy ny fampiasana." – Michael Faraday
“Tsy ho tian'ny olona na oviana na oviana ireo lahateny tena mampianatra; ireo lahateny malaza dia tsy hampianatra mihitsy.” – Michael Faraday
"Ny tsipika andriamby hery dia mampita hevitra tsara lavitra sy madio kokoa noho ny andian-teny andriamby tondra-drano na tondra-drano andriamby: manalavitra ny fiheverana ny courant na roa ary koa ny fluide na ny fluide, nefa mampita hevitra feno sy mahasoa sary ho an'ny saina.” – Michael Faraday
"Ny natiora no namantsika tsara fanahy indrindra sy mpitsikera tsara indrindra amin'ny siansa andrana raha avelantsika hilatsaka ao an-tsaintsika ny teniny." – Michael Faraday
"Na inona na inona jerenao, raha jerena akaiky dia tafiditra ao anatin'izao rehetra izao ianao." – Michael Faraday
"Tsy misy na inona na inona tsara loatra ka tsy ho marina." – Michael Faraday
"Tsy misy na inona na inona mahagaga loatra raha tsy mifanaraka amin'ny lalàn'ny natiora izany." – Michael Faraday
“Sady manjavozavo eo amin’ny vavako sy ny sofiko ny mpahay fizika ka mihevitra aho fa tsy hampiasa azy io mihitsy. Be loatra ny mitovy amin'ny feo telo misaraka amin'ny "I" amin'ny teny iray." – Michael Faraday
“Hampianatra ny tenantsika amin’izay fantatra ve isika, ary avy eo dia hanary izay rehetra azontsika, hivadika ho amin’ny tsy fahalalana hahazoana fanampiana hitarihana antsika any amin’ny tsy fantatra?” – Michael Faraday
“Satria ny fiadanana ihany no fanomezana avy amin’Andriamanitra; ary satria Izy no manome izany, nahoana isika no hatahotra? Ny fanomezany tsy hay lazaina ao amin’ny Zanany malalany no fototry ny fanantenana tsy isalasalana.” – Michael Faraday
“Tombantombana? tsy manana aho. Miankina amin'ny zavatra azo antoka aho. ” – Michael Faraday
“Ny Baiboly, ary izy irery ihany, tsy misy ampiana na nesorina tamin’ny olombelona, ​​no hany mpitari-dalana sy ampy ho an’ny tsirairay, amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toe-javatra rehetra.” – Michael Faraday
“Ny bokin’ny zavaboary izay tokony hovakintsika dia nosoratan’ny rantsantanan’Andriamanitra.” – Michael Faraday
"Ny fahaiza-manao fandraharahana dimy tena ilaina amin'ny fahombiazana dia ny fifantohana, ny fanavakavahana, ny fandaminana, ny fanavaozana ary ny fifandraisana." – Michael Faraday
"Ny zava-dehibe dia ny mahafantatra ny fomba hitondrana ny zava-drehetra mangina." – Michael Faraday
"Ny mpampianatra dia tokony hanome ny mpihaino ny antony feno hinoana fa ny heriny rehetra dia nampiasaina ho an'ny fahafinaretana sy fampianarana." – Michael Faraday
"Ny tsiambaratelo dia voarakitra amin'ny teny telo: asa, vita, avoaka." – Michael Faraday
“Tsy fantatr’izao tontolo izao hoe firy amin’ireo eritreritra sy teoria nandalo tao an-tsain’ny mpanao fanadihadiana ara-tsiansa iray no nopotehina tao anatin’ny fahanginana sy ny tsiambaratelon’ny fanakianana mafy nataony sy ny fanadihadihana ratsy nataony!” – Michael Faraday
"Tsy misy varavarana misokatra kokoa ahafahanao miditra amin'ny fandalinana ny filozofia voajanahary noho ny fandinihana ny fisehoan-javatra ara-batana amin'ny labozia." – Michael Faraday
“Tsy misy zavatra mampatahotra toy ny olona mahafantatra fa marina izy ireo.” – Michael Faraday
"Ny rano dia amiko, miaiky aho, tranga iray izay manaitra tsy tapaka ny fahatsapana mahagaga isaky ny mijery azy aho." – Michael Faraday
"Iza no tsy ho nihomehy raha nilaza tamin'ny 1800 izy fa ny metaly dia azo alaina amin'ny alàlan'ny herinaratra na ny sarin'ny simia." – Michael Faraday
“Nahoana ny olona no ho diso lalana rehefa manana an’io Boky voatahy io hitari-dalana azy izy ireo?” – Michael Faraday
Fironam-barotra 10 ambony indrindra 2022